Timoteo I 6 NA-TWI - Adwuma ne sika - Ɛsɛ sɛ wɔn a - Bible Gateway
Timoteo I 5Timoteo II 1
Timoteo I 6 Nkwa Asem (NA-TWI)
6 Ɛsɛ sɛ wɔn a wɔyɛ asomfo no nyinaa de nidi ma wɔn wuranom sɛnea ɛbɛyɛ a wɔn mu bi nkasa ntia Onyankopɔn ne yɛn nkyerɛyerɛ no. 2 Ɛnsɛ sɛ asomfo a wɔn wuranom yɛ gyidifo bu wɔn abomfiaa efisɛ, wɔn nyinaa yɛ anuanom. Mmom, ɛsɛ sɛ wɔsom wɔn som pa efisɛ, wɔn a wobenya wɔn som no ho mfaso no ne gyidifo a wɔdɔ wɔn no. 3 Ɛsɛ sɛ mokyerɛkyerɛ na moka eyinom nyinaa. Obiara a ɔbɛkyerɛkyerɛ nkyerɛkyerɛ foforo na ɔrenka nokware a ɛfa yɛn Awurade Yesu Kristo ne yɛn nyamesom ho no, 4 yɛ ɔhantani a onnim hwee. Ɔyɛ obi a ofi adwene bɔne mu gye akyinnye na ɔko nsɛm so a, ɛnam so de anibere, akasakasa, ayeyawayeyaw, nnipa ho adwemmɔne 5 ne mansotwe a efi adwene a emu nnɔ mu na nokware nni mu ba mu. Wodwen sɛ nyamesom yɛ ɔkwan bi a wɔnam so pɛ sika.